यस्तो थियो ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीचको पाँच बुँदे सहमति ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
यस्तो थियो ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीचको पाँच बुँदे सहमति !
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित ४४ जना सदस्यको सपथग्रहण कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका बीचमा पाँच बुँदे सहमति भएको बताएपछि नेपाली राजनीतिमा तरंग आएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सही सूचनाका आधारमा आफ्नो धारणा राख्नुभएपछि अताल्लिएका प्रचण्डले आज बिज्ञप्ती नै जारी गरेर चुनौती दिनुभएको छ । तर तथ्यले ओलीले सही कुरा खोलेको देखाएको छ ।
ओलीले सम्बोधनका क्रममा २०६१ मंसिर १८ मा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सहमति भएको बताउनु भएको छ । सहमतिपत्रमा के के बिषय उल्लेख भएको थियो भन्ने खुलिनसकेको भन्दै उहाँले प्रचण्डको भण्डाफोर गर्नुभयो र भन्नुभयो, ‘त्यो पाँच बुँदेमा के थियो ? कि ज्ञानेन्द्रले भन्नुपर्यो, कि प्रचण्डले भन्नुपर्यो ।’ आफ्नो सम्बोधनको क्रममा ओलीले थप्नुभयो, ‘असोज १८ र माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरे । पाँच बुँदे सहमतिपछि ज्ञानेन्द्रले देशभर नागरिक अभिनन्दनको कार्यक्रम गर्दै देश दौडाहामा निस्किए ।’
यो विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिलो पटक खुलास गर्नुभएको भने होइन । तत्कालनीन माओवादी नेतृ हिसिला यमीले यसअघि नै यो तथ्य सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । विश्वप्रसिद्ध प्रकाशनगृह पेन्गुइन बुक्सबाट प्रकाशित ‘हिसिला फ्रम रिभोलुसनरी टु फर्स्ट लेडी’ पुस्तक मार्फत उहाँले यस विषयको सूचना लिक गर्नुभएको छ । ३८ अध्यायमा बाँडिएको हिसिलाको पुस्तक ३४६ पृष्ठको रहेको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबीचमा समन्वय गर्ने मानिसहरू अहिले पनि नेपाली राजनीतिमै रहेका छन । ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन राजाका तर्फबाट कमल थापाले छलफल गरेका थिए । प्रस्तावित पाँच बुँदामा माओवादीका तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराईले छलफल गरेका थिए ।
प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रकै सहमतिका आधारमा ज्ञानेन्द्र नागरिक अभिनन्दनको नाममा जिल्ला भ्रमणमा निस्किएका थिए । विभिन्न बहानामा शिक्षक, पत्रकार र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत मारिइरहेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्रले ढुक्कसँग नागरिक अभिनन्दनको अभियान चलाएका थिए । प्रचण्डको सहमति नभएको भए तत्कालनी अवस्थामा ज्ञानेन्द्र काठमाडौँभन्दा बाहिर निस्कन समेत पाँच पटक सोच्नुपर्ने अवस्था थियो । तर सोही सहमतिमा कारण ज्ञानेन्द्रको अभिनन्दनको कार्यक्रमहरू भएका थिए ।
यस्ता थिए प्रचण्ड र ज्ञानेन्द्रबीच त्यस समयमा भएको पाँच बुँदे सहमति
१. राजाले संसदीय राजनीतिक गरिरहेका दलहरुलाई प्रतिबन्धन लगाउनु पर्ने, सबै नेताहरुलाई जेल चलान गरेर पार्टीहरुलाई प्रतिबन्ध लाउनुपर्ने र त्यसै अनुरुप २०६१ माघ १९ को घटना घटाइएको थियो ।
२. ज्ञानेन्द्र राजा रहने र माओवादीलाई निःशर्त सत्ता सुम्पिनु पर्ने ।
३. राजा ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा भएकाले उनलाई देशभरी डुलेर नागरिक अभिनन्दन गर्न दिनुपर्ने र ज्ञानेन्द्रले लोकप्रियता बढाउन पाउनुपर्ने । यस अनुसार माओवादी युद्धकैबीचमा उनी नागरिक अभिनन्दन गर्न देश घुमेका थिए ।
४. तात्कालीन माओवादी लडाकूलाई निःशर्त नेपाली सेनामा मिसाउनुपर्ने ।
५. जेलमा रहेका सबै माओबादी नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नुपर्ने ।
अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा राजा ज्ञानेन्द्रले असहमति जनाएपछि त्यो अलिखित बनेको थियो । यद्यपी त्यसकै जगमा ज्ञानेन्द्रले २०६० माघ १९ गते कु गरेका थिए । उनले सहमतिमा प्रस्ताव गरिएको बुँदा अनुसार नै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरी ज्ञानेन्द्रले नै मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी लिएका थिए । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्ने, गिरफ्तार गर्ने र जेल हाल्ने काम गरेका थिए ।
कमल थापा र बाबुराम भट्टराइले ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि लिखित रूपमा आकार दिन छलफल गरे । छलफल बाँकेमा राप्रपाका तत्कालीन नेता धवलशम्शेर राणाको घरमा भएको थियो । तर एक नम्बर बुँदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वय गर्न ज्ञानेन्द्रले इन्कार गरेपछि सहमति तोडिएको थियो ।
ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको सहमति हुननसकेपछि प्रचण्डले भारतसँग अनुरोध गरे । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले उनीहरूको माग अनुसार भारतको हितमा काम गर्ने वचन लिएर माओवादी र नेपालका दलहरूबीच १२ बुँदे दिल्ली सहमति भएको थियो ।